Museveni Oo Lagu Eedeyay Xasuuq Uu ku Gaystay Ciidamo Laga Qaaday Somaliya – Heemaal News Network
Warbixin ay BBC-da ka qortay dad rayid ah oo lagu laayay Magaalada Kampala ee Caasimadda dalka Uganda, xiligii dalkaas ay ka socdeen ololaha doorashada ayaa waxaa ka hadlay Hon. Makindye E oo kamid ah siyaasiyiinta Mucaraadka ee Uganda.
Hadal-qoraal ah oo bartiisa Twitter-ka soo dhigay Hon. Makindye ayuu si kulul ugu Cambaareeyay falkii lagu laayay dadkii rayidka ahaa oo u badnaa taageerayaasha Mucaaradka, waxaana xasuuqa uu ku eedeeyay Ciidamo ka tirsan Uganda oo laga qaaday dalka Soomaaliya, xiligii ololaha doorashada Uganda.
Sidoo kale Hon. Makindye E waxaa uu sheegay in Ciidanka xasuuqa geystay uu Magaalada Muqdisho ka qaaday Madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni oo adeegsaday, isagoona falkaas ku tilmaamay mid lagu Argagax gelinayo dadka Ugandheeska.
“Waxay qiraysaa inay dileen dadkeenna Biri-ma-geydada ee safka ku jiray, iyadoo caddayntiina ee BBCAfricaEye, waxa uu isaga Ciiddamo Komaandoos ah ka keensaday Somalia si ay u argagax geliyaan dadka Ugandheeska. Rajo,xitaa adiga waad awoodaa inaad adeegsato” ayuu yiri Siyaasiyi Hon. Makindye.
Dhinaca kale Madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni oo la hadlaayay siyaasiga Mucaaradka Bobi Wine ayaa waxaa uu ku faanay inuu heysto Ciidamo ka yimid Magaalada Muqdisho oo Kampala la geeyay, xiligii ka socdeen ololaha doorashada dalkaas.
“Waxaa arkaa iyagoo ku qeylinaya Bobi Wine meel kasta. Aniga waxaan iri: “OK. Waan arki doonaa”. Guddigayga ayaan heegan geliyey. Wiilashayda waa ka soo laabteen Mogadishu, weyna og yihiin wax aan u socomo inaan samayno”ayuu yiri Museveni.
Madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Kaguta Museveni ayaa markii lixaad oo xiriir ah uu ku guuleystay Madaxtinimada dalkaas, waxaana doorashadii ugu dambeysay uu ku guuleystay Bishii Janaayo ee sanadkan 2021.
Gudoomiyaha Komishanka Oo Ka Hadlay Tirinta Codadka Doorashada Somaliland.
Alshabaab Oo Sheegtay Inay Bada ku Weerartay Ciidamo ka Tirsan Dawlada Somaliya
Uhuru Kenyatta Oo Wafdi ka Socda Dowladda Sacuudiga kala Hadlay Arimo Dhawr ah.
Farmaajo Iyo Musaveni Oo Kulan ku Yeeshay Caasimada Kambala.(Sawirro)